အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: လွင့်မြောသွားသော အပိုင်းအစများ...
ပတ်ဝန်းကျင်သည် ဆိတ်ငြိမ်မှုအား ဖန်ဆင်းပေးခြင်းဖြင့် သူ့ရင်တွင်းမှ အံကျလာသော စကားလုံး များ၏ လမ်း ကြောင်းအား ကောင်းချီးပေးလေသည်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးတွင် သူအလိုချင်ဆုံးအရာ ဖြစ်သော ဤဆိတ်ငြိမ်မှုများ အား ပေးသနားခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်အား ခဏဖြစ်ဖြစ်တော့ သူကျေးဇူးတင်လိုက်မိပါသည်။ သူအလွန်ပျော် နေမိသည်။ အခုလိုမျိုး သူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ သွေးကြောများတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ စီးဆင်းခဲ့သော ခံစားမှုများ အား ယခုကဲ့သို့ စကားလုံးများအဖြစ် သွန်ချဖို့ အချိန်တော်တော်များများကို သူစိတ်ရှည်စွာ စောင့်စားခဲ့ရသည် မဟုတ်လား? အခုတော့ သူစောင့်စားရကျိုးနပ်ခဲ့လေပြီ...။ ဤပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးရှိ များစွာသောလူတို့ သည် သူ့နှုတ်ခမ်းမှ ဖန်တီးလိုက်သော ကကွက်တိုင်းကို သတိကြီးစွာဖြင့် စောင့်ကြည့်နေကြကြောင်းကို သူ ကောင်းစွာ သတိထားလိုက် မိပြီလေ...။
"ကျွန်တော် ပထမဆုံးအနေနဲ့ အခုလိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့ အတွက် အရမ်းကို ၀မ်းသာကြည်နူး မိကြောင်း ဦးစွာ ပြောပါရစေ။ အခုကျွန်တော်ပြောမယ့် အကြောင်းတွေ...။ အဲ...။ ကျွန်တော်ပြောမယ့် အကြောင်းတွေဆိုတာ ကျွန် တော် သိပ်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူအကြောင်းပါ။ ကျွန်တော်လေ...။ ကျွန်တော့်ချစ်သူ့ကို အရမ်းကို မြတ်နိုး တယ်ဗျာ...။ ကျွန်တော့်ဘ၀တစ်ရှောက်မှာ တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ သူ့လောက် ကျွန်တော် မချစ်ခဲ့ဖူးပါဘူး...။ ကျွန်တော်သူ့ကို ချစ်တဲ့ အချစ်မှာ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မပါခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဘာကိုမှလည်း မလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော် လိုချင်သမျှ…။ ကျွန်တော်မျှော်လင့်သမျှ အရာအားလုံးသာ… သူ ငြိမ်းချမ်းဖို့ပါ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ကျွန်တော် ဘာမှ မလိုချင်ခဲ့ပါဘူး…။ တကယ်လို့များဗျာ…။ မနက်ဖြန်မှာသာ ကျွန်တော့်အတွက် “ကျွန်တော်” ဆို တဲ့ ဖြစ်တည်ခွင့်ရှိနေအုံးမယ်ဆိုရင်…။ ကျွန်တော့်ချစ်သူဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အရိပ်တွေအဖြစ် အမြဲရှိ နေ အုံးမှာပါ…။
သူပြောလက်စ စကားတွေကို ခဏဖြတ်ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက် မိသည်။ တစ်ကယ်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သူစိတ်ဝင်စားလို့တော့ မဟုတ်…။ သူအရှေ့မှာ ဆက်ပြော ရတော့မယ့် အကြောင်းအရာတွေအတွက် အားယူလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဆက်ပြောရမယ့် စကားတွေဟာ ပျော်စရာ၊ ဂုဏ်ယူစရာ (အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့ချစ်သူအတွက်ပေါ့) တွေ ဆိုပေမယ့် တော်ရုံနှင့် သူ့လည်ချောင်းဝမှ ဘယ်လို မှ ထွက်လာနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သူကောင်းကောင်း သိ နေပါတယ်…။ ရှေ့ဆက်ပြောရမည့် အကြောင်း များကို တွေးမိလိုက်ချိန်မှာ သူ့ရင်ထဲတွင် အမျိုးမည် မသိသော ခံစားချက်တစ်ခုကို သူသတိထားမိလိုက်သည်။ သေချာတာကတော့ သူ့လည်ချောင်းတွေ ဆို့နင့်နေခြင်းပါပဲ…။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ သူပြီးအောင်တော့ ဆက် ပြောရတော့မှာပေါ့…။ လွင့်မြော နေတဲ့သူ့ရဲ့ အာရုံတွေကို အမြန်ဆုံး စုစည်းလိုက်ပြီး ….
အငြင်သာဆုံး တောက်ခေါက်သံ တစ်မျိုးပေါ့...။
“ မကြာလိုက်ပါဘူး…။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရွှေရောင်အတိတ်တွေဟာ ဝေးကွာခြင်းဆိုတဲ့ ဘ၀ရဲ့ အလှည့် အ ပြောင်းတစ်ခုမှာ တစ်ခန်းရပ် ပြဇာတ်တစ်ခုအဖြစ် ပြည်ဖုံးကား အချခံလိုက်ရတယ်ဗျာ…။ ကျွန်တော် မရှိတော့ တဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ ကျွန်တော့်ချစ်သူ ဘယ်လောက်အထိ အထီးကျန်ဆန်မလဲဗျာ..။ ခင်ဗျား တို့ စဉ်းစားကြည့် ကြပေါ့…။ သူကရော ဒီဝေဒနာတွေကို ဘယ်အချိန်အထိ တောင့်ခံနိုင်မတဲ့လဲ? ကျွန်တော် အပြစ်မပြောပါဘူး…။ ဟုတ်တယ်…။ ကျွန်တော်သူ့ကို အပြစ်မတင်ရက်ခဲ့ပါဘူး…။ ကျွန်တော်သူ့ကို ပျော်ရွှင်အောင် မထားနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့ဘေးမှာ ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်က ပျော်ရွှင်အောင်ထားပေးခဲ့တယ်…။ ကျွန်တော်မပေးနိုင်တဲ့ နွေး ထွေးမှုတွေကို အဲ့ဒီ့လူကပေးနိုင်ခဲ့တယ်…။ ကျွန်တော်မပေးနိုင်တဲ့ ၂၁ရာစုရဲ့ မက်မောဖွယ်ရာ အိပ်မက်တွေကို သူမဘေးမှာ ရှိတဲ့လူက ပေးနိုင်ခဲ့ တယ်။ ဘာကြောင့်များ ကျွန်တော် သူ့ကို စိတ်နာရ၊ ဒေါသထွက်ရမှာလဲဗျာ။ ကိုယ်မရှိတဲ့ အချိန်၊ ကိုယ်မပေးနိုင်တဲ့ အချိန်တွေမှာ သူက ကျွန်တော့်ကိုယ်စားပေးတယ်…။ လစ်လပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ် သူရဲ့အထီးကျန်မှုတွေကို ဖြည့်ဆီးပေးခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီလူကို ကျွန်တော်က ကျေးဇူးတောင် တင်ရမယ်။”
“ မပြောပါနဲ့ဗျာ…။ မပြောကြပါနဲ့…။ ကျွန်တော့်ချစ်သူကို သစ္စာမရှိတဲ့လူရယ်လို့ မစွတ်စွဲကြပါနဲ့။ ကျွန်တော့်အ တွက် သူမခံစားခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်တွေအတွက် ဒီလူတစ်ယောက်သူဘေးမှာရှိနေခြင်းဟာ သူမကို သနားညှာတာ သောအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကပေးတဲ့ ဆုလာဒ်တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော့်ချစ်သူ ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ရပါဘူး…။ ခင်ဗျားတို့မေ့သွားကြပြီလား..? သူပျော်ရင်၊ ကျွန်တော်ပျော်တယ်လေ..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တစ်ခုတော့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ..။ ကံကြမ္မာရဲ့ အလှည့်အပြောင်းတစ် ခုကြောင့် ကျွန်တော် သူမဘေးမှာ ပြန်နေခွင့်ရခြင်း ဟာ…။ သူမရဲ့ ပျော်ရွှင်သာယာနေတဲ့ လောကလေးကို ဖျက်ဆီးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်…။ ဒီလိုသာ သူမခံ စားရမယ်မှန်းသိရင် အစောကြီးကတည်းက ကျွန်တော်သူမဆီ ပြန်လာဖို့ မကြိုးစားခဲ့ပါဘူးဗျာ..။
သူပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုတိယအကြိမ်သတိထားမိလိုက်တော့ အရောင်အမျိုးမျိုးသော မျက်နှာတွေပေါ်မှာ ကြေကွဲမှု ဟု ယူဆလို့ရသော ခံစားချက်များကို တွေ့ရှိနေရလေသည်…။ သူ တကယ်ပင် အံ့သြသွားခဲ့လေသည်…။ သူ ပြောခဲ့တဲ့ အရာတွေထဲမှာ ၀မ်းနည်း၊ ကြေကွဲစရာတစ်ခုမှမရှိ…။ ဒီလူတွေ ဘာတွေများ ဖြစ်နေကြပါလိမ့်ပေါ့…။ သူခေါင်းတစ်ချက်မျှသာ ခါလိုက်မိပါတယ်…။ သူပြောနေတဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို အပြီးအထိ နားထောင်ပြီး သွားရင်တော့ စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုရဲ့ အရသာကို သူတို့ သေချာပေါက် ခံစားကြရမယ်ဆိုတာကို သူယုံ ကြည်ပါတယ်…။
“အခုတော့ ကျွန်တော် သိပ်ငြိမ်းချမ်း စေချင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူဟာ ကျွန်တော့်ကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲ ခဲ့ရပါပြီ။ ရွေးချယ်မှုဆိုတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကြားမှာ ညပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူ…။ ညပေါင်းများစွာထွက် ပေါက် မဲ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် တကယ်ကို ယူကြုံးမရ ဖြစ်ရတယ်ဗျာ…။ ကျွန်တော်သူမကို ဒီလိုပုံ မျိုးနဲ့ ဘယ်လိုမှ ကြည့်မနေနိုင်ပါ ဘူး...။ သူမရဲ့ ပူလောင်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀ကို ပြာအတိ ဖြစ်သွားအောင် လောင်မြိုက်စေခဲ့ ပါတယ်…။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ? ရှင်းပါတယ် ကျွန်တော်က သူ့ကိုငြိမ်းချမ်းစေချင်တဲ့သူ၊ ပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့ သူပဲဗျာ သူမအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကျွန်တော် လုပ်ပေးရမှာပေါ့…။ အဲ့ဒီ့မှာ သူမအတွက် ဘာလို အပ်သလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ သိပ်ကြာကြာမစဉ်းစားလိုက်ရပါဘူး…။ ကျွန်တော်သဘောပေါက် လိုက်တယ်…။ သူမအတွက် လိုအပ်နေတာ… “ လွတ်မြောက်မှု”။ ကျွန်တော်ဘာမှ တွေဝေနေစရာမလိုပါဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အတူ သူမရဲ့လွတ်မြောက်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက် ကျွန်တော် ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါ တယ်...။ ကျွန်တော့် ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်…။ သူမ အမှန်တကယ်ကို ငြိမ်းချမ်းသွားခဲ့ပါ တယ်…။ အခု တော့ ကျွန်တော့်ချစ်သူ တစ်ကယ်ကို လွတ်….မြောက်…သွား ခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ….။”
ကံကြမ္မာ ကျီစယ်သော အခါတွင်မူ...
စားပွဲအား တစ်စုံတစ်ခုနှင့် ထုလိုက်သောအသံနှင့်အတူ ထွက်ပေါ်လာသော စကား သံမှာကား…
“ တရားခံ၏ ထွက်ဆိုချက်များအား ကြားနာစစ်ဆေးပြီးနောက် အောက်ပါအမိန့်အား ချမှတ်လိုက် သည်”
“ တရားခံ အဘ ဦး မိုးမြင့်၏သား မိုးမြင့်ကျော်သည် သေဆုံးသူ ၎င်း၏ဇနီး မသက်ဇာနည် အား မသေမချင်း ဓားဖြင့် ထိုးသတ်ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားသဖြင့် အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်း ကျ ခံစေ…”
p.s- အချစ်ကြီးသူများ အမျက်ကြီးခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 2:18 AM
ဒီ ပို့စ်လေးကို ဖတ်လိုက်ရတာ အရမ်းကျေနပ်ပါတယ်
အကာကို ရတာနဲ့ အနှစ်ကို မပိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်
တခါတခါ အချစ်ကြီးတာနဲ့ အမျက်ကြီးတာက နီးနီးလေးဆိုတော့... ထွေးရောယှက်တင် ဖြစ်တတ်တယ် ထင်ပါရဲ့... အဆုံးသတ်ကျတော့ လှောင်ပိတ်တဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုရလိုက်တယ်... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Blackdream ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဖတ်ရတာ တကယ်ကိုကျေနပ်စရာပါပဲ...
အား.... ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ အဲတာ အချစ်မဟုတ်ဘူး Black Gyi.. အချစ်ဆိုတာ...... အင်း....ငါလဲမသိဘူး :P
အချစ်ဆိုတာ နောက်ဆုံး အတ္တတွေအားပြိုင် ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အချစ်...သိပ်ကြီးတော့ အတ္တပိုကြီးလာတာပေါ့။ သူ့ကို လွတ်မြောက်စေချင်တယ် ဆိုတာလဲ ကိုယ့်အတ္တပါပဲ..။
IN THIS POST, THE CHARACTER IS A BIT CREEPY THOUGH......
WHY DON'T HE SHOOT HER? THAT WILL MAKE IT EASIER FOR HER :p
I WANT TO KNOW WHAT U R THINKING IN MIND COZ U R VERY QUIRKY :)
ဘလက်ရေ မင်းပို့စ်ကို အစက အဆုံးကိုဖတ် အဆုံးရောက်မှ အစကို ပြန်ဖတ်၊ အဲလိုမှ နားလည်တော့တယ် :)
( တကယ်တော့ မျက်ရည်ဆိုတာ အငြင်သာဆုံး တောက်ခေါက်သံ တစ်မျိုးပေါ့...။ ) တဲ့...ဘယ်သူ့ မှာမှ အပြစ်မရှိဘူး ထင်တာပဲ... :P ( မအိ...! )
အစွန်းရောက်မှုတွေ ကင်းဝေးပါစေဗျာ။ အစိမ်းရောင်စာသားတွေကိုတော့ေ၇ရေလည်လည် ခိုက်တယ်ဗျာ။
ဟင်း...........ချစ်တယ်ဆို ဘာလို့ မသေမချင်းဓားနဲ့ ထိုးသတ်ရတာလဲ ကြောက်စရာကြီးဗျာ တကယ့်အပြင်းစားတွေ အစိမ်းရောင်စာသားများအား ကူးယူသွားကြောင်းပါ........။
သယ်ရင်း.....နင်ကလဲမရေးလိုက်နဲ့ရေးလိုက်တာနဲ့ ပေးသေတော့တာပဲ မသေမချင်းဓါးနဲ့ထိုးသတ်တာတော့လန့်တယ်....ဟီးးးးးး ပျော်ရွှင်ပါစေ
ကောင်းတယ်ကွာ .. ရေးလိုက်တိုင်းကိုကောင်းနေတော့တာပဲ .. မင်းခေါင်းကို
" ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး "
အစအဆုံးစာဖတ်သူကိုဆွဲဆောင်သွားလိုက်ပုံကတော့ တကယ့် အရေးအသားပဲဗျို့ ရေလည်လန်းတယ်
ဖြစ်နေကျထက် မဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေး
ရေးနေကျထက် ဆန်းတဲ့အဖွဲ့အနွဲ့တွေဆိုတော့ ကြေကွဲ လွမ်းဆွတ် သွေးပျက် နောက်ဆုံး အရမ်းကို ငိုင်သွားရတယ်
အချစ်ကြီးလို့အမျက်ကြီးတယ်တဲ့ ။ အင်း မသေမချင်း ဓါးနဲ့ ထိုးသတ်တာကြီးကတော့ ဟိုက်ရား ကျောချမ်းစရာ ကြီးပါလားဗျာ။ Black Dream ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း စာသားတွေကတော့ လေထဲပျံနေလေရဲ့။
အဲဒါတော့ မမိုက်ဘူး။ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကိုပဲ အဲလောက်တောင်လုပ်ရက်ရသလားလို့။ အဲလိုလူတွေ ရှိတာ ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ သူတို့ချစ်တဲ့လူတွေတော့ သေတာပဲ။ ဟိုးတစ်ခေါက်က သတင်းမှာတစ်ခါပါတယ်။ အစ်ကိုတွေ့လိုက်လားတော့မသိဘူး။ လင်မယားနှစ်ယောက်လေ ရန်ဖြစ်တာ မိန်းမက ကလေးကို microwave ထဲထည့်ပြီးဖွင့်လိုက်တာ။ အဲလိုလည်းရူးကြတယ်။ သူတို့နဲ့အနေနီးတဲ့လူတွေလည်း မလွယ်ပါဘူးနော်။